Maxaa ku dhacay Reer Waqooyinimaddii | allsanaag
Maxaa ku dhacay Reer Waqooyinimaddii
Madaxda maamulka Beelaha Isaaq ku midaysan yihin ee SNM, oo uu ka mid yahay Ra’isawasaare ku xigeeka Soomaaliya Maxamed Cumar Cartan, oo maalmahan oo dhan ku doodayey in kuraasta aqalka sare ee Xildhibaanada ka imanaya waqooyiga Sooomaaliy la wada siiyo Beeshiisa Isaaq. Ayaa arintan uu ku doonayey i isaga oo ku gabanaya magacii Ra’isawasaare ku xigeenka Soomaaliya uu ku dhaco xildhibaanaddii ka imanayey gobolada Sool iyo Sanaag. Markii ay u suurta geli wayday damaciisii waalnaa, ayuu maanta intuu shaqadii uu Qaranka Soomaaliya u hayeey meel iska soo dhigay waxa uu bulshada Caalamka u sheegay inuu yahay hogaamiyaha beesha Isaaq, sidaas awgeedna isaga oo beeshiisa matalaya in laga qay geliyo madasha shirka Qaran ee Soomaliya.
Labo wejiilanimadan SNM ee Muqdisho ka socota mid la mid ah ayaa ka dhacday gobolka Sool. Dhowaan, gaari laga leeyhay Puntland ayaa waxa lagu afduubtay degaanada SNM, maalmo ka dibna gaari laga leeyahay SNM ayaa lagu afduubay degaanada Punland iyaga oo loo aarayo gaarigii hore,,
Waxa lagu heshiiyey oo lagu balamay in gawaarida la kala haysay laysu celiyo, markii la wada yimi madashaa lagu balansanaa, madaxdii SNM waxay bilaabeen dhaqank[odii faanka. Laakiinse taliyihii Punland oo u adkaysan waayey iska hadalkooda ayaa siiyey jawaab cad waxay ugu jawaabeen siyaasad kama hadlayno,, Halkaas waxa kaaga muuqanaysa laba wajiilnimada iyo hadalada is burinya ee madaxda SNM meel walba ay la taagan yihiin
← Hadal iyo Faan Midna Waxqabad ma Noqdaan Hajj pilgrimage: Top Saudi cleric ‘will not deliver’ traditional sermon →